“Puntland waa u sharaf-dhac in ajnabi la soo qafaashay madax-furasho loogu haysto dhulkeeda” G/lle Dhexe Gantaal. – Radio Daljir
Garoowe, Mar 28 – Taliyaha ciidamada birmadka Puntland ayaa magac-xumo iyo sharaf-dhac ku tilmaamay in dad ajaanib ah oo la soo qafaashay madax-fuasho loo keeno Puntland, wuxuuna bulshada u soo jeediyay in si wadajir ah loola dagaallamo.
G/lle dhexe Cabdirisaaq Gantaal Axmed ayaa hadalkan ka sheegay shir-jaraa’id oo uu maanta (Isniin) ku qabtay magaalada Garoowe, kadib howl-gallo lagula dagaalamayo burcad-badeedda oo ay ciidamada ammaanka Puntland ka fuliyeen degmada Bender Beyla ee gobolka Karkaar.
Taliyuhu waxa uu markii ugu horeeysay digniin adag u soo jeediyay odayaasha iyo qoysaska ay ka soo jeedaan burcad-badeedda waxana uu sheegay in ay saamayntu soo gaari doonto haddii ayan intii karankood ah gacan ka gaysan la dagaalanka burcad-badeedda iyo soo af-jaridda burcad-badeednimada. Qabaa’ilka ayaa si wayn loogu dhaliilaa in ay marka horena gabbaad siiyaan burcad-badeedda, marka danbena ay wax ka difaacaan haddii lala dagaallamo amaba ay u soo muddacaan haddii lasoo qabto.
Ciidamada ammaanka Puntland ayaa waxa ay howl-gallo ammaan oo aan lagu guulaysan ka fuliyeen xeebaha degmada Bender Beyla, halkaas oo burcad-badeed soomaali ahi ay ku haystaan qoys ka kooban todoba ruux kana soo jeeda dalka Denmark. Wararkuw axa ay sheegayaan in burcaddu dadkii ay haysteen la aadeen dagaano ka durugsan Bender Beyla.
Sidoo kalena, dhawaan ayay ciidamo iyo odayaal-dhaqameed is biirsaday waxa ay burcad-badeeddii ka nadiifiyeen xeebaha Garacad ee gobolka Mudug halkaas oo u ahayd xarun aad u ballaaran oo ay burcaddu ku xoog-badan tahay.